ထိုင်း 100% ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း
မတ်လအထူးကမ်းလှမ်းချက်! "Pfizer" မှထိုင်းနိုင်ငံ GENOTROPIN GOQUICK PEN 36 IU နဲ့အကောင်းဆုံး HGH
19.99 ฿ အရည်အမှား: အငြင်းပွားမှုများ၏မှားယွင်းတဲ့နံပါတ် (3 ပေး 1..2 မျှော်မှန်းထားသည်)
24 /7customer support & ပွုပွငျပွောငျးလဲဒေါ်လာနှင့်ဒေသခံ CURRENCY
5% လျော့စျေး checkout ရမိုဘိုင်း application ကိုသုံး
ဆုံးရှုံး WEIGHT FOR HGH ကုထုံး
ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမရှိကြပေ။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ကြောင်းသဘာဝအလျောက်တ္ထုများဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအသက်အရွယ်အတိုင်း, သင်တို့၏ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုတဖြည်းဖြည်းမှဦးဆောင်နှင့်အိုမင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အသက်အရွယ်-related နာမကျန်းစတင်ခြင်း accelerates သောလျော့နည်းစေပါသည်။ သဘာဝဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏အသက်ငယ်နှစ်များတွင်လေ့သောအဆင့်ဆင့်မှသူတို့ကိုပြန်ပို့ခြင်းအမှုတွင်အားဖြင့်ဟော်မုန်း၎င်း၏နုပျိုအဆင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်။ အဆိုပါအရင်ကဆိုရင်များအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ: - သင်အိပ်ရာ (အချည်းနှီးသောအစာအိမ်) ကိုသွားမတိုင်မီနေ့စဉ် 2IU နှင့်အတူစတင်ပါ။ - အပေါ်5ရက်ပေါင်းနဲ့ off2ရက်။ - ကျနော်တို့နံနက် / ညဦး (တိုင်းနှစ်လ) အချိန်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
HGH BOX ဆိုတာဘာလဲ?
Away အတု HGH နေ!